Nea Ɛto So Abien A Ɔde Kɔmaa Korintofo 10:1-18
Paul kyerɛɛ nea enti a ne som adwuma no fata (1-18)
Yɛn akode nyɛ ɔhonam mu de (4, 5)
10 Afei, me Paul, mede odwo a Kristo wɔ ne n’ayamye+ resrɛ mo. Sɛ mewɔ mo nkyɛn a, menyɛ onipa titiriw biara,+ nanso minni hɔ a, meyɛ ɔkokodurufo ma mo.+ 2 Meresrɛ, na sɛ meba a, mamfa akokoduru amma sɛnea mehwɛ kwan no, na mankasa anibere so ankyerɛ wɔn a wobu yɛn sɛ yɛnantew ɔhonam mu no. 3 Na yɛnam ɔhonam mu de, nanso yɛnkɔ ɔko wɔ ɔhonam mu. 4 Efisɛ akode a yɛde kɔ ɔko no nyɛ ɔhonam mu de,+ nanso Onyankopɔn ma ɛyɛ den,+ na yetumi de tutu nneɛma a ase atim denneennen* no gu. 5 Na yɛretutu nsusuwii ne biribiara a ayɛ osiakwan a ɛmma nkurɔfo nnya Onyankopɔn ho nimdeɛ no agu,+ na yɛde nsusuwii nyinaa ayɛ nkoa sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ osetie ama Kristo; 6 na yɛayɛ krado sɛ, sɛ munya yɛ osetie wie* ara pɛ, yɛde asotwe bɛma obiara a ɔbɛyɛ asoɔden no.+ 7 Mohwɛ nneɛma aniani. Sɛ obi gye ne ho di sɛ ɔyɛ Kristo dea a, ɛnde ma ɔnsan nsusuw nokwasɛm yi ho: Sɛnea ɔyɛ Kristo dea no, saa ara na yɛn nso yɛyɛ Kristo dea. 8 Awurade ama yɛn tumi sɛ yɛmfa nhyɛ mo den, na ɛnyɛ sɛ yɛmfa mmu mo abam.+ Sɛ mede saa tumi no hoahoa me ho boro so kakra mpo a, m’ani renwu. 9 Na mempɛ sɛ ɛyɛ te sɛ nea mede me nkrataa no rehunahuna mo. 10 Na wɔka sɛ: “Ne nkrataa mu nsɛm mu yɛ duru na tumi wom, nanso sɛ ɔno ara wɔ ha a, ɔyɛ mmerɛw, na mfaso biara nni ne nsɛm a ɔka so.” 11 Ma saa onipa no nhu sɛ, sɛ yenni mo nkyɛn a, nea yɛka wɔ krataa mu no, ɛno ara na sɛ yɛwɔ mo nkyɛn a, yɛbɛyɛ.*+ 12 Na yɛmpɛ sɛ yɛkan yɛn ho fra wɔn a wɔkamfo wɔn ho no, na yɛmpɛ sɛ yɛde yɛn ho toto wɔn ho koraa.+ Saa nkurɔfo no de wɔn ho ayɛ susudua; obiara de ne ho susuw ne yɔnko, na obiara de ne ho toto ne yɔnko ho. Nea wɔyɛ no kyerɛ sɛ wonni ntease.+ 13 Nanso yɛn de, yɛrenhoahoa yɛn ho ntra ɔhye a wɔde ama yɛn no, na mmom, yɛbɛhoahoa yɛn ho wɔ ɔhye a Onyankopɔn asusuw ama yɛn no* mu, na ɛba ara besi mo so.+ 14 Nokwarem no, ɛnyɛ sɛ yɛretwe yɛn mu atra so te sɛ nea gyama yɛannu mo nkyɛn no. Efisɛ yɛn na yedii kan de Kristo ho asɛmpa no bae ara beduu baabi a mowɔ no.+ 15 Daabi, ɛnyɛ sɛ yɛrehoahoa yɛn ho atra ɔhye a wɔde ama yɛn no akɔ obi adwuma mu. Mmom yɛn ani da so sɛ, bere a mo gyidi reyɛ kɛse no, nea yɛayɛ no bɛyɛ kɛse wɔ yɛn asaasesin mu. Ɛno ansa na yebetumi ayɛ bi aka ho, 16 na yɛakɔka asɛmpa no akyerɛ aman foforo wɔ mo akyi noho, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛremfa nea obi ayɛ wɔ n’asaasesin mu nhoahoa yɛn ho. 17 “Na nea ɔhoahoa ne ho no, ma ɔnhoahoa ne ho Yehowa* mu.”+ 18 Efisɛ ɛnyɛ nea ɔkamfo ne ho na ɔfata,+ na mmom nea Yehowa* kamfo no no,+ ɔno na ɔfata.
^ Anaa “agye ntini.”
^ Anaa “mo setie nya di mu.”
^ Nt., “ɛno ara na yɛbɛyɛ wɔ nneyɛe mu.”
^ Anaa “asusuw atwa ama yɛn no.”